Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247621 times)
« Reply #540 on: August 27, 2011, 12:59:45 PM »
" သေ ချင် တယ် "
ခါးတွင် ကြိုးချည်လျှက် ကိုချူချာ ပန်းခြံကို ဖြတ်လျှောက်လာသည် ။ ရဲသားက မေးသည် ။
" ဟေ့လူ.. ခါးကို ဘာဖြစ်လို့ကြိုးချည်ထားရတာလဲ "
" ကြိုးဆွဲချ သေမလို့မိန်းမက ကျုပ်ကို ပစ်သွားတယ်.. "
" အဲ့ဒါဆို ကြိုးကို လည်ပင်းမှာ ချည်လေဗျာ. "
" ကျနော်စမ်းကြည့်ပြီးပြီ...မဖြစ်ဘူး.. အသက်ရှုရ အင်မတန် ကျပ်တယ်. "
« Reply #541 on: August 27, 2011, 01:08:32 PM »
" အ လယ် တံ တား "
ယာဉ်ထိန်းရဲ သင်တန်းတက်နေသော ကိုချူချာကို နည်းပြဆရာက မေးသည် ။
" ဆိုကြပါစို့ .. မင်းဟာ ဗော့ဒ်ကာ အရက် ၄ ပက် သောက်ထားတယ်..။
မင်း မော်တော်ကား မောင်းလာတယ်..။ တံတားနားကို ရောက်လာတယ်။
မင်းရဲ့ မျက်စိထဲမှာ တံတား နှစ်ခု ဖြစ်နေတယ်..။ ဘယ်တံတားက မင်း
ဖြတ်မောင်းမလဲ...။ ဘယ်ဘက် တံတားလား..။ ဒါမှ မဟုတ် ညာဘက်
" ကျနော် နောက်ထပ် ၂ ပက် ထပ်သောက်လိုက်မယ်.. ။ မျက်စိထဲမှာ
တံတား သုံးခု ဖြစ်လာမယ်..။ အဲ့ဒိအခါမှာ အလယ်တံတားကနေ စိတ်ချ
လက်ချ ဖြတ်မောင်းမယ်..... "
« Reply #542 on: August 27, 2011, 01:16:27 PM »
" စိုး ရိမ် စ ရာ ကိ စ္စ "
အာရုံကြော အထူးကု ဆရာဝန်က ကိုချူချာကို မေးသည် ။
" အသံကို ကြားနေရပေမဲ့ ဘယ်သူ ပြောနေတယ်... ဘယ်က
ပြောနေတယ် ဆိုတာ ခင်ဗျား မသိတာ ဖြစ်ဖူးလား... "
" ဖြစ်ဖူးတာပေါ့ "
" အင်း စိုးရိမ်စရာပဲ... ဒါနဲ့ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဖြစ်လဲ "
" တယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ "
« Reply #543 on: August 30, 2011, 11:30:56 AM »
" စိတ် ချ ရ အောင် "
ဘီယာဘားတွင် ဘဏ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး စကားပြောနေကြသည် ။
" မီးခံသေတ္တာထဲက ပိုက်ဆံတွေ... စိန်ရွှေ ရတနာတွေကို သူခိုး ခိုးသွားတာ..
ငါ နားလည်နိုင်ပါတယ်..၊ ဒါပေမဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာရဲ့မိန်းမကိုပါ ခိုးသွားတာတော့
" အရှင်းကြီးပဲ... သူ့ ကို ဘဏ်မန်နေဂျာ မရှာအောင်ပေါ့ကွာ.. "
" ရှာ နေ တုန်း ပဲ "
ကုမ္ပဏီ တစ်ခုသို့လူငယ်တစ်ဦး အလုပ်လာလျှောက်သည် ။
" လူကြီးမင်းတို့ကုမ္ပဏီက ငွေကိုင်စာရေးအသစ် ရှာနေတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား.. "
" ဟုတ်တယ်.... အဟောင်းကိုလည်း ရှာနေတုန်းပဲ "
« Reply #544 on: August 30, 2011, 12:20:15 PM »
" အ စွမ်း ပြ ပြီ "
ဘော်ရှီဗစ် ( ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် ) အဘိုးကြီး နှစ်ဦး ပန်းခြံမှာ ဆုံကြသည် ။
တစ်ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ကို ပြောသည် ။
" ဟေ့..အီဗန်.. မင်းမှတ်မိလား...၊ ၁၉၁၈ ခုနှစ်က မိန်းမတွေကို မငမ်းရအောင်
ဆိုပြီး.. ငါတို့ ကို ဆေးပြားလေးတွေ ဝေပေးတာလေ... "
" မင်း ဘာပြောတယ်... ငါ ကောင်းကောင်း မကြားရဘူး... "
ပထမ အဘိုးကြီးက အသံမြှင့်ပြီး ထပ်ပြောသည် ။
" ငါ ပြောတယ်... မိန်းမတွေကို မငမ်းရအောင်ဆိုပြီး တို့ တစ်တွေကို ဆေးပြားလေး
တွေ ဝေပေးတာ မင်း မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား.. အေး.. အဲ့ဒီဆေးအစွမ်းဟာ အခုမှ
ပြတယ်လို့ငါ ထင်တယ်ကွာ.. "
« Reply #545 on: August 30, 2011, 12:27:13 PM »
" သ တိ ဆို ပို သည် မ ရှိ "
မိဘများက သားငယ်ကို စားသောက်ဆိုင်သို့ခေါ်လာသည် ။
" ဟေ့..သား..၊ အစားမစားပဲ.. ဘာဖြစ်လို့အပေါ်အင်္ကျီတွေ ချိတ်တဲ့နေရာပဲ
" ကျနော့် အနွေးထည် အင်္ကျီိကို ကြည့်နေတာခင်ဗျ.. ဖေဖေ့ ဂျာကင်တော့
" တစ် လမ်း မောင်း "
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လာလျှောက်သော လူငယ်ကို ရဲအရာရှိက မေးသည် ။
" တစ်လမ်းမောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ "
" ရှေ့ ကသွားတဲ့ ကားကို နောက်ကပဲ တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ် "
« Reply #546 on: August 30, 2011, 12:33:14 PM »
" ကံ မ ကောင်း ချင် တော့ "
ဖောက်ထွင်းရေးသမား နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။
" အခုတလော ငါ အင်မတန် ကံနိမ့်နေတယ် ထင်တယ်ကွာ..
မနေ့ က အိမ်တစ်အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းမလို့ကြိုးစားတာ
" ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး ထင်တယ် "
" လုပ်ပါသော်ကော... ၀င်ခိုးမဲ့ အိမ်က ခွေးကို ၃ ရက် ကြိုပြီး
ယဉ်ပါးအောင် ငါကိုယ်တိုင် အစာကျွေးခဲတာပဲ "
" ဒါဆို ဘာလို့မအောင်မြင်ရတာလဲ "
" အိမ်ထဲက ကြောင်ရဲ့အမြီးကို တက်နင်းမိတယ်ကွာ. "
« Reply #547 on: August 30, 2011, 12:42:26 PM »
" နာ ရေး ကြော် ငြာ "
မစ္စတာ ဟမ်းမားသည် သတင်းစာ ဖတ်နေရင်း မိမိကွယ်လွန်ကြောင်း နာရေးကြော်ငြာကို
အံ့သြတစ်ကြီး တွေ့ လိုက်ရသည် ။ သို့ ဖြင့် သူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်သူထံ တယ်လီဖုန်း ဆက်သည်။
" ဟယ်လို .. ဂျွန် လား...၊ ခင်ဗျား ကျနော့် နာရေးကြော်ငြာ တွေ့ ပြီးပြီလား.. "
" တွေ့ ပြီးပြီ...၊ အင်း..ဒါနဲ့ခင်ဗျား အခု ဘယ်ကဆက်တာလဲ... "
" မွေး နေ့လား "
ထမင်းစားပွဲပေါ်သို့ဇနီးဖြစ်သူ ဖယောင်းတိုင် ၁၅ တိုင် စိုက်ထားသော ကိတ်မုန့် ကို ချသည် ။
" မိန်းမရေ... ဒီနေ့ဘယ်သူ့မွေးနေ့ လဲကွ.. "
" ဘယ်သူ့ မွေးနေ့ မှ မဟုတ်ဘူး.. ရှင် ကျမကို သိုးမွှေးအင်္ကျီဝယ်ပေးတဲ့ ၁၅ နှစ်မြောက်
နှစ်ပတ်လည်နေ့"
« Reply #548 on: August 30, 2011, 12:54:13 PM »
" ထိုင် ခုံ "
ပြဇာတ်ရုံတွင်ဖြစ်သည် ။ အားလပ်ချိန်အပြီး လင်မယားစုံတွဲ တစ်တွဲသည် မိမိတို့ ၏
ထိုင်ခုံနေရာကို အမှောင်ထဲတွင် ရုတ်တရက် ရှာမတွေ့ ဖြစ်နေသည် ။ ခုံတန်းတစ်ခုကို
ဖြတ်လေ၊ျှာက်ရင်း ခုံတစ်ခုံတွင် ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးကြီးကို ယောင်္ကျားက မေးသည်။
" စောစောက ကျနော်တို့အပြင်ထွက်တုန်း ကျနော် ခြေထောက်တက်နင်းမိတာ
အစ်မကြီးလား ခင်ဗျာ.. "
" ဟုတ်တာပေါ့....ဒါတင် ဘယ်ကမလဲ ......"
" မိန်းမရေ...တို့ ထိုင်ခုံတွေ့ ပြီဟေ့... ဒီဘက်ကို လာခဲ့..... "
" ပင် စင် စား "
" ခင်ဗျား သား ကျောင်းပြီးရင် ဘာလုပ်မယ် စိတ်ကူးသလဲ "
" ဒီပုံစံအတိုင်း ဒီကောင် စာသင်နေရင်တော့ ကျောင်းလည်းပြီးရော.
ပင်စင်စားလည်း ဖြစ်ရောလို့ထင်တာပဲ "
« Reply #549 on: August 31, 2011, 04:16:32 AM »
သတင်း ထောက် တယောက် ဆောင်းပါး ရေးရန် လမ်းပြ နှင့် အတူ လူ သားစား လူရိုင်း များ နေထိုင် ရာ ဒေသ ကို ရောက်လာ သည်၊၊ လမ်းပြ က ပြောလိုက် သည်။ “ရှေ့မှာ ထမင်း ဆိုင် ရှိတယ်။ ထူးထူး ဆန်းဆန်း ဟင်း တွေ ရ တတ်တယ်၊”
ဆရာဝန်ဦးနှောက် ၅၀ သား ——————-၅၀၀၀ ကျပ်
ရှေ့နေဦးနှောက် ၅၀ သား ———————၆၀၀၀ ကျပ်
ကျောင်းဆရာဦးနှောက် ၅၀ သား ————–၇၀၀၀ ကျပ်
ကြံ့ဖွံ့ဦးနှောက် ၅၀ သား———————–၄၀၀၀၀ ကျပ်
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ၅၀ သားပြည့်ဖို့ ကြံ့ဖွံ့တွေ အများကြီး သတ်ရလို့ပါ၊”
ချေးသေး အကြောင်းတောင် မသိပဲနဲ့
ဖိုးသာ လေးဘေး မှာ လူစိမ်း တယောက် လာ ထိုင်သည်၊
“ကလေး၊ တို့တွေ စကား ပြောရ အောင်၊ စကား ပြောရင် လေယာဉ် ပျံက ပိုမြန်မြန် ရောက် မယ်၊”
ဖိုးသား လေး လှည့် ကြည့်ပြီး ပြန်မေး လိုက်သည်။
“ဒါဆို လည်း ပြောတာ ပေါ့။ ဘာ အကြောင်း ပြောမှာ လဲ၊”
ဖိုးသား ဖတ်နေသော စာအုပ်ပိတ်လိုက်သည်။
“ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအကြောင်းမပြောခင် ကျွန်တော်တခုမေးချင်တယ်၊ ဆိတ်တွေ၊ နွားတွေ၊ မြင်းတွေ အားလုံးမြက်စားကြတယ်၊ ဆိတ်ကျတော့ ချေးတုံးအလုံးကလေးတွေပါတယ်။ နွားကတော့ ချေးပြဲပြဲတွေပါတယ်။ မြင်းကျတော့ မြက်ခြောက်လိုလိုပဲ ပြန်ထွက်လာတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ”
“အေး။ အဲဒါတော့ ငါလည်း မစဉ်းစားတတ်ဘူးကွ၊”
“ခင်ဗျားက ချေးသေးအကြောင်းလေးတောင်မသိပဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် နျူကလီးယားအကြောင်းပြောနိုင်မှာလဲ၊”